Questerium: Trinite mpanota, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Mampahafantatra anao indray izahay momba ny lalao traikefa nahafinaritra avy amin'ny developer G5, iray amin'ireo mavitrika indrindra raha miresaka momba ny sary an-tsary momba ny iOS izahay. Questerium: Sinister Trinity dia mitantara ny meteor iray nianjera tamina tanàna kely iray. Mpinamana telo, ny ben'ny tanàna, mpampianatra ary banky, Mandinika ny vatolampy habakabaka izy ireo ary manao andrana maromaro. Amin'ny fanaovana masinina mampidi-doza hanitarana ny herin'ny meteorite dia simba ilay masinina ary manimba ny tanàna iray manontolo ny herin'ny meteorite. Ny zava-maniry sy ny biby dia miaina mutation mahatsiravina raha ny ben'ny tanàna kosa manandrana mamindra ny tanàna rehetra afa-tsy zaza roa, zaza roa very ary tsy maintsy hahita toy izany isika.
Teny an-dàlana mba hahitantsika ireo zaza roa very, dia hahita toerana 39 mahavariana hitadiavana fanazavana izahay, sehatra 17 samy hafa izay tsy maintsy ahitantsika zavatra handroso amin'ny lalao, minigame 21 sarotra, zava-bita 23 izay tsy maintsy tratrarintsika mba hamitaana ny lalao amin'ny fomba feno, ireo zava-bita izay miha mitombo hatrany sarotra arakaraka ny karazan-tsafidy nofidintsika tamin'ireo efatra azontsika alaina. Toy ny maro amin'ireo lalao farany nohavaozina tato anatin'ny volana vitsivitsy, Questerium koa dia mifanaraka amin'ny Game Center, izay ahafahantsika mampifanaraka ny fivoarantsika na amin'ny alàlan'ny iPhone na amin'ny alàlan'ny iPad, ankoatry ny afaka mifaninana amin'ireo namantsika.
Toy ny ankamaroan'ny lalao avy amin'ny developer G5, Questerium dia mitaky farafahakeliny 1,18 GB Ao amin'ny fitaovantsika, nomarihina ho an'ny taona 9 sy miakatra ary mitaky farafaharatsiny iOS 6 na taty aoriana mba hahafahany mankafy ny lalao. Ny kinova Questerium: Sinister Trinity ho an'ny iPad dia manana vidiny mahazatra 6,99 euro, raha ny kinova ho an'ny iPhone kosa dia manana vidiny mahazatra 4,99 euro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Questerium: Trinite mpanota, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Foxconn dia mandroso ny drafitra hanombohany hanamboatra efijery OLED ho an'ny iPhones